समृद्ध वडा बनाउन पार्टीले उमेदबार बनाएको हो सीजन कार्की - sambahak
Home अन्तरबार्ता समृद्ध वडा बनाउन पार्टीले उमेदबार बनाएको हो सीजन कार्की
जनताले यस्तो समस्या पर्यो भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ नै दिन्न ,वडा अध्यक्षका उमेदबार
तपाइँको परिचय दिनुहोस् न ?
म सिजन कार्की। चाँगुनारायण नगरपालीका वडा नम्बर १ दुवाकोट सरस्वतीखेलमा बस्छु।आसन्न स्थानीय निर्बाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट वडा अध्यक्षको प्रत्यासि उमेदबार हुँ।
वडा अध्यक्षको उमेदबार हुनुहुन्छ। यो कलिलो उमेरमा ठूलो पार्टीबाट टिकट पाउनु भयो। पार्टीले कसरी बिस्वास गरयो तपाइँलाई?
नेपाली कांग्रेस पुरानो पार्टी हो। यूवाहरूलाई पनि नेपाली कांग्रेसको मूलधारको राजनीतिमा युवाहरूलाई समाबेस गरेर अघि बढाई रहेको छ। त्यस मध्य म पनि ३३ बर्षीय एक यूवा हुँ।जसले नगर कार्यसमितिको सचिब भएर नेपाली कांग्रेसको संगठन सुदृढीकरणमा क्रियाशिल छु। नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेबिसंघ र तरुणदलसँग आबद्ध भएर राजनीतिमा होमिएको छु। वडा नागरिक मञ्चको संयोजक भएर पनि काम गरिसकेको छु। २०७२ सालको बिनासकारी भुकम्पको बेला पीडितको उद्धार र राहत बितरणमा पनि सक्रिय रहेको थिएँ।यस्तै कोभिड १९को बेला पनि ज्यानको बाजि थापेर अग्रपंक्तिमा रहेर स्वास्थ्य सामग्री,खाद्यान्न लगायत बितरण गरेको छु। समाजसेवा र बिकास निर्माणमा सक्रिय रहेको छु। जसकारण पनि पार्टीले मलाई बिश्वास गरेर उमेदबार बनाएको छ।
उमेदबार त हुनु भयो। जित्नु हुन्छ त? कस्तो छ माहोल ?
चाँगुनारायण नगरपालीकाको आधार स्तम्भ हो नेपाली कांग्रेस पार्टीकोलागि वडा नम्बर १ अहिले सम्म अरुपार्टीले जित्न सकेको छैन। कांग्रेसको आधार स्तम्भलाई झन् मजबुत बनाएको छु। जसकारण मैले जित्नेमा म बिस्वस्त छु। मैले जित्छु भन्दैमा निष्क्रिय भएर बस्ने कुरै भएन ।मेयर उपमेयर र नगरसभा सदस्यहरू सबैलाई जिताउने जिम्मेवारी पनि पाएको छु । अहिले घरदैलो कार्यक्रममा ब्यस्त छु। नेपाली कांग्रेसकोलागि माहौल बढ्दै गएको छ ,वडा नम्बर १ मा।
घरदैलो कार्यक्रममा ब्यस्त हुनुहुन्छ। जनतालाई कस्ता कस्ता आश्वासन दिनु भएको छ नि ?
समृद्ध वडा बनाउन पार्टीले मलाई उमेदबार बनाएको हो। पार्टीको घोषणापत्र अनुरुप काम गर्नेछु। म कम बोल्छु,काम धेरै गर्छु। जनतामाझ परिचित पनि छु। जसले गर्दा मैले भ्रम छर्ने र नसक्ने कामकोलागि आश्वासनहरू बाँडेको छैन। जनताको घरदैलोमा पुगेर यस्तो समस्या परयो ,उस्तो समस्या परयो भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ दिन्न भनेको छु।उहाँहरू म उमेदबार बनेकोमा खुसी हुनुहुन्छ।मत हाल्ने दिनको प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ।
तपाइँले जित्नु भयो भने बिकास निर्माणको कामलाई कसरी अघि बढाउनु हुन्छ नि ?
मैले चुनाबमा उमेदबार नभएपनि बिकास निर्माणको काममा सक्रिय नै थिएँ। मैले जितेपछि बिकासको पहिलो खुड्किलोको रुपमा रहेको सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछु।चलनचल्तिको बाटो स्थानीयकै सहमतिमा फराकिलो पार्ने छु।नमक्सामा भएको बाटोलाई स्थानीयको जग्गा दुबैतर्फ बराबरी लिएर कसैलाई असर नपर्ने गरि फराकिलो बनाउनेछु। कच्ची सडकलाई स्तररोन्नती गरि कालो पत्रे गर्नेछु। मनोहरा खोला किनारलाई करीडोर बनाउन पहल गर्नेछु।बस्ति बढ्दै गएकाले ब्यबस्थित बस्ति निर्माणमा जोड दिदै घरघर सम्म बाटो पुरयाउनेछु। कुलो र राजकुलोको संरक्षणगरी सडक निर्माणमा जोड दिनेछु। राष्ट्रीय गौरबको रुपमा रहेको वीर अस्पताल हाम्रै वडामा बन्न लागेको छ। जसले हाम्रो वडा समृद्ध र बिकसित गर्न मद्दत गर्नेछ। त्यहाँ वडाबासिलाई रोजगारीकोलागि पहल गर्नेछु।ब्याबसायिक रुपमा खाद्यान्न तरकारी पसल खोल्न प्रेरित गर्नेछु।प्रख्यात मठमन्दिरहरू पनि यश बडामा छन्। सरस्वती मन्दिर,सुन्दरीदेबी कालिकामाईको मन्दिर आदि छन्।जसको प्रचारप्रसार गरि धार्मिक पर्यटक भित्र्याएर आयआर्जनको बाटो बनाउने छु। कृषिलाई परम्परागत भन्दापनि आधुनिकिकरण गर्ने छु। अहिले वडामा टनेलखेति बिस्तार हुँदै गएकोछ।अझ टनेलखेतिलाई प्रोहत्सान गर्न अनुदान र कृषकलाई पुरस्कारको ब्यबस्था गर्नेछु। उद्यम गर्न तालिमको ब्यबस्था गरि युवालाई कलकारखाना खोल्न प्रेरित गर्नेछु।
खानेपानीकोलागि के गर्नु हुन्छ नि ?
वडाबासीलाई खानेपानीको समस्या नहोस् भनेर डीप बोरीङ्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। यहाँ पानीको अस्थायी स्रोत छैन।बढ्दो बस्तीका कारण पानीको समस्या वडामा पर्ने देखिन्छ। जसको समाधान डीप बोरिङ्ग नै हो। घरघरसम्म खानेपानी सहितको धारो पुरयाउने लक्ष्य राखेको छु। जसलाई पूरा गर्न क्सक्षम हुन्छु भन्ने बिस्वास लिएको छु। मेलम्चिको पानी काठमाण्डौमा आईसकेको छ।सबैतिर बितरण सुरुभएपछि निलबाराहिबाट काठमाण्डौको मिनिभबनमा लगिएको पानीलाई काठमाण्डौतिर रोकि हाम्रो वडामा बितरण गर्न पहल गर्नेछु। वीर अस्पतालका लागि निलबाराहिमा रहेको पानीट्याङ्किबाट बितरण गर्ने कुरा छ। हाम्रो वडामा मेलम्चि आयोजना नपरेपनि वीर अस्पताल सम्म पुरयाउँदा स्थानीयलाई पनि बितरण गर्नुपर्छ भनेर पहल गर्नेछु।
जनतालाई सुशासन कसरी दिनुहुन्छ नि ?
मेरो वडाबासिलाई सेवा लिन आउँदा राजनैतिक आस्थाका आधारमा कुनै भेदभाब गर्दिन। कर्मचारी संयन्त्र सेवाग्रायी मैत्री बनाउने छु। घरको नक्सापास,घरबाटो सिफारिसमा तत्काल सहज तरिकाले सिफारिस गर्दिनेछु। नागरिकता,मृत्यदर्ता,जन्मदर्ता र बसाइसराइको काम तत्काल सकिने गरी सिफारिस गरिदिनेछु।प्रकृया पुरयाएर आए मलाई जुनसुकै ठाउँमा भेटेपनि सिफारिस गर्दिनेछु। स साना बादबिबाद भएका ठाउँमा आफैँ उपस्थित भएर मेलमिलाप गराई दिनेछु।
वडाबासीलाई स्वास्थ्य सेवा निः शुल्क गर्न वीर अस्पतालाई आग्रह गर्नेछु।जहेन्दारले मात्र पाउँदै आएको छात्रबृत्ति गरीबका छोराछोरीलाई पनि दिलाउनेछु। किसानलाई निशुल्क मलबिउ बितरणकासाथै कृषि औजार पनि बितरण गर्ने छु सिंचाईको ब्यबस्था गर्दिनेछु। जनताको सेवामा सधैं लागिरहनेछु। जसकोलागि ७ वटा रुखमा छाप लगाई ७ जना उमेदबारलाई जिताउन हुन आग्रह गर्दछु।
Previous article४६ साल देखि एमालेका सक्रिय नेता राजु खड्का काँग्रेस प्रवेश
Next articleसूर्यविनायकमा उपमेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवारले गठबन्धन उम्मेदवारलाई सघाउने